Imodeli yokulinganisa umgangatho weSoftware yasimahla-iGeofumadas
Ikhaya/Geospatial - GIS/Umzekelo ukulinganisa umgangatho we-Free Software
Geospatial - GISGvSIGezintshaqgis
Olu xwebhu yapapashwa kungekudala kwixesha elidlulileyo liSebe Iinkqubo kunye Systems kwiYunivesithi uSimon Bolivar kunye National Telecommunications Commission of Venezuela CONATEL, ndafunda oku ngokusebenzisa uthungelwano elo lizwe wabiza geomatics simahla kwaye ngokwenene uyasikhuthaza umdla njengokuba sibini ukuhambisa ishizi nabani na.
Injongo yolu xwebhu kukunikezela iseti iimpawu ezisemgangathweni ukuvavanya Software Free isicelo phantsi kwe ISO / IEC standard imodeli 9126 kunye nomgangatho Dromey naphaya phantsi scheme livele njengoko Fly GIS.
Inkqubo yokulinganisa iinjongo ezifana nokusebenza, ukuphatheka nokugcinwa kwamanzi kumanqanaba amane okuhlalutya:
1. Imilinganiselo (iinkalo zangaphakathi, imixholo kwinkqubo, imiba yangaphakathi kunye nemixholo yemveliso kunye nemiba yangaphakathi neyimiba yomntu)
2. Iindidi. (Ezi zi-14 zinxulunyaniswa nemilinganiselo emithathu ekhankanywe apha ngasentla)
Isifundo siba nomdla, kunye namava ngokwawo, kuba ngaphandle kwentsomi ekhoyo eVenezuela malunga nokuzibophelela kwezopolitiko kubusoshiyali, kukwakho nentshukumo enomdla kumxholo womthombo ovulekileyo (njengoko kubonisiwe kumandla kunye ne-gvSIG kwi ukuhanjiswa), kunye nommiselo ukuze ngo-2004 iimeko zikarhulumente ngokuthe ngcembe zifudukele kwisoftware yasimahla. Olu tyekelo sele lubonakala kumazwe aliqela ase Mzantsi Melika, emali emele utyalo mali oluninzi ukuza kuthi ga ngoku lunikezelwe kwisoftware yobunini okanye ukwaphulwa kwelungelo lokushicilela.
Ndikucebisa ukuba ujonge uxwebhu, njengoko lunokuphunyezwa ngamanye amazwe okanye amaziko. Ngaphandle kwentshayelelo kunye nezigqibo, umxholo ubandakanyiwe ngohlobo lwezichaseko, indlela elandelweyo, isindululo semodeli esemgangathweni kunye nophando lwamatyala kunye neziphumo ezibhaliweyo. Nangona imeko yolu xwebhu yenziwe ngeGrass, Qgis kunye nezixhobo zeThuban, inkqubo inokulungiswa kwezinye iindlela ezinesono a yi thandwayo.
Bona uxwebhu ngokubanzi
Bona uxwebhu olusetyenziswa kwi-GIS.
Ndingayifumana phi iphepha elithetha kuphela i-dromey quality model ??